Arsene Wenger oo la kulmaya todobaadkan Tababareyaasha xulalka qaranka… (Muxuu kala hadli doonaa?) – Gool FM
Haaruun October 18, 2021
(World) 18 Okt 2021. Arsene Wenger ayaa la kulmi doona todobaadkan, Tababareyaasha xulka qaranka, isagoo doonaya inuu taageero kaga helo qorshaha uu ku doonayo in Koobka Adduunka labadii sanaba mar la qabto.
Halyeyga Kooxda Arsenal, sidoo kalena ah Madaxa FIFA u qaabilsan horumarinta kubadda cagta dunida ayaa macallimiinta qarammada la kulmi doona todobaadkan, si ay u ansixiyaan in koobka Adduunka la qabto labadii sanaba mar, isla markaana uu si xawaaro leh ugu socdo.
Tababaraha xulka England ee Gareth Southgate ayaa wadahadallo aan rasmi ahayn la yeeshay Wenger, kuwaasoo ku saabsan qorshahan, laakiin wadahadallada soo socda ee todobaadkan ayaa fursad u siin doona inuu si faah-faahsan ugu sharraxo tababareyaasha xulalka sida isbedelladu u shaqayn doonaan.
71-sano jirkaan ayaa gadaal ka riixaya rajada uu qorshihiisu ku shaqeyn karo iyo inay ugu dambeyn macallimiinta xulalku aqbaraal in isbeddel lagu sameeyo Koobka Adduunka.
Waxa uu doonayaa Wenger in marka la qabto koobka Adduunka 2026-ka oo ay marti gelinayaan dalalka USA, Mexico iyo Canada labo sano kaddib 2028 la qabto markii ugu horreysay koobka Adduunka oo labo sano u dhexeyso.
Isagoo la hadlayey Wargeyska L’Equipe, Wenger ayaa yiri: “Qof walba waan la tashaday, waxaana weydiiyey labo su’aal, ‘Tan koowaad oo ah miyaa doonaysaa inay wax waliba sida ay hadda yihiin ku sii socdaan?’ 100% maya ayay dheheen, ‘Tan labaadna waxa ay tahay, ma haysaan fikrado dib loogu qaabayn karo Jadwalka ciyaaraha qarammada?’ waxaan soo dhoweynayaa fikradaha oo dhan.
“Inta u dhexeysa 80% illaa 90% dadku waxa ay door bidayaan in dib loo qaabeeyo jadwalka heerka isreeb-reebka, lana soo koobo, si firaaq loogu sameeyo tartammo heer qaran ah.
Wenger waxa uu ku dooday in dadka ka soo horjeeda mashruuciisan ay u sheegaan sababta, isla markaana ay keenaan qorshe kiisa ka wanaagsan.
“Lukaku waa dammiin, mana ahan qaladka Chelsea" – Paolo Di Canio
De Bruyne ayaa ka hadlay xiddiga uu jeclaan lahaa inuu sanadkan ku guuleysto Ballon d'Or